ကိုရီးယား ဖက်ထုပ်(မန်ထို) | Wutyee Food House
တို့ဟူးနွေး (၃ယောက်စာ) »
August 7, 2011 by chowutyee
ကြက်သွန်မြိတ် [spring onion] ♦ ၂စည်း (ပါးပါးလှီးထားပါ)
တို့ဟူး [tofu] ♦ ၁ဗူး (၃၀၀ဂရမ်)
ကြက်သွန်နီ [onion] ♦ တ၀က် (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ [garlic] ♦ ၃မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားပါ)
နှမ်းဆီ [sesame oil]
မန်ထို အစာသွပ်ရန် ပြင်ဆင်နည်း [Mandoo Preparation Recipes]
၁။ အရင်ဆုံး နှုတ်နှုတ်စဉ်းထားသော ၀က်သားများကို ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ နှမ်းဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) တို့ဖြင့် သမအောင် လက်ဖြင့် ရောနုယ်လိုက်ပါ။ နုယ်ထားသော ၀က်သားများကို ပန်းကန်ပြားတစ်ခုပေါ် ထည့်ထားပါ။
၂။ ပြီလျှင် ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်မြိတ်ကို ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ဖြင့် ရောမွှေပြီ ၀က်သားထည့်ထားသော ဘေးတွင် ပုံထားလိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ပြုတ်ထားသော မှိုများကို အရည်ညှစ်ပြီ နှုတ်နှုတ်စဉ်းပေးပြီ ပဲငံပြာရည်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ သကြား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ နှမ်းဆီ(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း) တို့ဖြင့် ရောနုယ်ထား၍ ပန်းကန်ပြားထဲ ထည့်ပေးပါ။
၄။ တို့ဟူးကို ရေစစ်ပြီ နှုတ်နှုတ်စဉ်းလိုက်ပါ။ ရေမရှိတော့မှ ဆားအနည်းငယ်၊ နှမ်းဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ရောနုယ်ကာ ပန်းကန်ပြားထဲသို့ ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၅။ နောက်ဆုံးမှ ပန်းကန်ပြားထဲသို့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီများထည့်ပြီ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို သမအောင် လက်ဖြင့် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၆။ အစာသွပ်ရန် ပြင်ဆင်ပြီလျှင် မန်ထို စလုပ်ပါတော့မည်။
မန်ထို လုပ်နည်း [Mandoo Recipes]
၁။ မန်ထိုဖက်ရွက် တစ်ရွက်ကို ယူ၍ နုယ်ထားသော အစာ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ကို အလယ်တွင် ထည့်လိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် ဖက်ရွက် ဘေးနှုတ်ခမ်းသားများကို ရေအနည်းငယ်စီ စွတ်လိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ဖက်ရွက်ကို တ၀က် ခေါက်လိုက်ပြီ ပုံတွပါသည့်အတိုင်း ပုံဖော်သွားပါ။
၄။ ထို့နည်းအတိုင်း ကျန်ဖက်ထုပ်များကို ထုပ်သွားပေးပါ။ ထုပ်ပြီလျှင် မန်ထိုတ၀က်ကို ပလတ်စတစ်အကြည် အုပ်ပြီ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်သိမ်းပေးထားပါ။ ကျန်တ၀က်ကို ကြော်ပါမည်။
မှတ်ချက်။ ။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းထားတဲ့ မန်ထိုများကို မကြော်မှီ ၁နာရီခန့် အခန်းအပူချိန်မှာ ပြန်ထားပေးထားပါ။
၅။ ဒယ်ထဲသို့ ဟင်းရွက်ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း) ခန့်ထည့်ပြီ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် တဖက်ကို ၁မိနစ်နှုန်းဖြင့် အဖုံးအုပ်၍ ၂မိနစ် မှ ၃မိနစ်ခန့် ကြော်ပေးပါ။
၆။ ဖက်ထုပ်များ အညှိရောင်သန်းလာလျှင် ရေ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)ခန့် ထည့်ပြီ အဖုံးပြန်အုပ်ပြီမှ ချပေးပါ။
ရ။ မန်ထိုများ ရပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်ပြားထဲသို့ ပြောင်းထည့်၍ ကင်ချီ(သို့) ဆော့ဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Tips: ဆော့လုပ်နည်းမှာ ဗီနီကာ နှင့် ပဲငံပြာရည်အကြည်ကို ဆတူရောမွှေလိုက်ပါ။
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 30 Comments
on August 7, 2011 at 6:33 pm | Reply ခင်ယမုံ
on August 10, 2011 at 8:33 am | Reply chowutyee
on August 7, 2011 at 7:27 pm | Reply မြတ်
အမတော့ကြိုက်သွားပြီး ၊ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ လုပ်စားလိုက်တော့မယ်နော် ၊ကြည့်ရင်းနဲ့ လျှာတောင်မှ ကျွမ်းပြန်နေပြီ ၊ သိလား ၊ အမ ဒီဘလောက်ကို ၀င်ဖတ်တာသိပ်မကြာသေး တော့ ဒါပေမဲ့ဖတ်ရင်းနဲ့ အရမ်းကြိုက်သွားတယ် ၊ ပဲပြုတ်မှာ ထန်းလျက်ထဲ့ရတယ် ၊ အမတို့ ဆီမှာ ထန်းလျက်ဝယ်လို့မရလို့ ၊ထန်းလျက်အစားဘာထည့်ရမလဲဟင် ၊ ပြောပေး
on August 10, 2011 at 8:34 am | Reply chowutyee
မမြတ်ရေ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. ပဲပြုတ်အတွက် ထန်းလျက်မရှိရင် သကြားထည့်လို့ရပါတယ်.. တူတူပါပဲ
on August 7, 2011 at 9:16 pm | Reply Cho Wut Hmone
Share doe ei share…good share bae..today i m going to do but different style as mine is square so i will do other design…love that food
on August 10, 2011 at 8:35 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်စားမယ်ဆိုတာ လုပ်စားဖြစ်လား.. လုပ်ပြီရင် ပုံတင်လိုက်အုန်းနော်…
on August 8, 2011 at 7:36 am | Reply hanlay
photo lay ka eat chin sayar lay myar myar tin pay par naw sis ka lawba kyi tal amyar kyi read chin tal plz naw ama
on August 10, 2011 at 8:39 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်။ ကြိုးစားပြီ ဟင်းတွေလည်း ဆက်တိုက် ချက်တိုက်ချက်ပြုတ်နေပါတယ် ညီမရေ
on August 9, 2011 at 6:09 am | Reply လင်းလင်းချစ်သူ
လင်းအိမ်သားတွေအားလုံးကြိုက်ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ထုပ်ရတာနဲနဲခက်တယ်နော် မမလောက်ကြည့်မကောင်းဘူး
on August 10, 2011 at 8:40 am | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ်။ ထုပ်ရတာ အကျင့်မရသေးလို့ပါ လင်းလင်း။ လုပ်နေကျဆို လွယ်သွားရော။ ကျေးဇူးပါနော်…
on August 28, 2011 at 5:29 pm | Reply Hnin lay
ဟိုင်း မဝတ်ရည် အမရဲ့ ဘလော့ ထဲကို ညီမလေးလဲဝင်လည်သွားပါတယ် ညီမလေးမသိတဲ့ ဟင်းတွေ အများကြီးသိခွင့် ရလို့မမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်နေတယ်
on September 20, 2011 at 8:37 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ.. 🙂
on August 29, 2011 at 4:28 am | Reply Htet
အစ်မရေ ဖက်ထုပ်ဖတ်က ဈေးကဟာက အ၀ါရောင်ဖြစ်ပြီး နည်းနည်းမာတယ်…ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရောလုပ်လို့ ရလား မသိဘူး…
on September 20, 2011 at 8:36 am | Reply chowutyee
ထက်ရေ ဖက်ရွက် ကိုယ်ဘာသာ လုပ်ခြင်းရင် ဂျုံ၊ ရေ၊ ဆားနည်းနည်းရယ် ရောပြီ မပျော့မမာလေး နုယ်ပြီ ဒလိမ့်တုံးနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံကို လိပ်ပြီ လှီးဖြတ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ်ရည်ကတော့ အလုပ်ရှုပ်တာမို့ ဖက်ထုပ်ရွက် Ready Made တွေပဲ ၀ယ်ဖြစ်တယ်.. CityMart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်..
on September 19, 2011 at 12:44 pm | Reply myattun naing
စမူစာလုပ်တဲ့ဖက်ရွက်နဲ့ကော လုပ်လို့ရလားမသိဘူး။ စမ်းတော့ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
on September 20, 2011 at 8:34 am | Reply chowutyee
Ko Myat Tun Naing.. စမူဆာ လုပ်တဲ့ ဖက်နဲ့ လုပ်လို့ မရဘူး.. ဖက်ထုပ်လုပ်တဲ့ ဖက်ရွက် သက်သက်ရှိတယ်.. Citymart မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်.. 🙂
on September 23, 2011 at 4:29 pm | Reply myattun naing
၀က်မရှိလို့ကြက်နဲ့လုပ်တယ်.ဖက်မရှိလို့ ရတဲ့ဖက်နဲ့လုပ်လိုက်တယ်. ဆီနဲနဲ နဲ့ အိုးပူတိုက်တော့ တောင်ကြီးက ဖက်ထုတ်ကြော်အာသာပြေသွားတယ်
ဖက်က ရေထိရင်ပြဲကျလို့ ဂျုံနဲ့ကပ်ရတယ် ခေါင်းဖီးပုံဖေါ်ရခက်လို့ အလိပ် လုပ်လိုက်တယ်
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း-နောက်ဟာ လေးတွေလဲ စမ်းကြည့်ဦးမယ်
on October 1, 2011 at 8:54 am | Reply chowutyee
Thanks you too also:D
on September 24, 2011 at 6:18 am | Reply Xman_နတ်လူမုန်း
တစ်ရုပ်ကတော့ ခေါ်တယ် စွေကောက်တဲ့
on October 1, 2011 at 9:04 am | Reply chowutyee
hote kae.. 😀
on October 9, 2011 at 3:41 am | Reply Charlie
on October 10, 2011 at 6:10 am | Reply chowutyee
on October 9, 2011 at 3:49 am | Reply Snow White
လုပ်မယ် လုပ်မယ် ဖြူနှင်း လုပ်မယ်
ကျွေးမယ် ကျွေးမယ် နော်…………..
on December 12, 2011 at 5:39 am | Reply areLuu
ဒီ WEB SITE လေး အမြဲတမ်း ပိုမို တိုးတက်ပြီး … အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ ကျေးဇူးးပါနော်. 😀
on February 27, 2012 at 1:42 pm | Reply Ma Phyu
on March 7, 2012 at 3:46 pm | Reply chowutyee
on March 1, 2012 at 4:56 pm | Reply thidamon
nyi ma wutyee,i like your blog and thanks alot.
on March 7, 2012 at 3:49 pm | Reply chowutyee